Maniry Info. About. What's This?
Ny hao dia bibikely tsy manana elatra izay kantsentsitra mitoetra aminny faritra maniry volo aminny olombelona sy ny biby hafa maro koa, ka raha manaikirea izy dia miteraka hidihidy aminy biby kaikeriny. Misy karazany roa ny hao mitsentsitra ny olombelona: ny haon-doha sy ny haofotsy. Manana ny haony koa ny kisoa, ny soavaly, ny alika ary ny biby fiompy hafa.
Maniry dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Ampanihy, Faritanini Toliary. Ny isam-poniny dia 6553 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 50709 ary ny kaodin-distrika dia 507
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia arachide. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny isanomby dia 10000. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 0 ny mponina no manao asa tanana. 95 ny mponina no miasa tany. 0 ny mponina no miasa aminny fanjonoana. 3 ny mponina no miasa aminny fiompiana. 1 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha.
Ahitana tobim-pahasalamana ao. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Misy fitrandrahana harena an-kibonny tany aminny fomba indostrialy. Misy fitrandrahana harena an-kibonny tany aminny alalanny asa tanana ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia kamiao. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 19 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 52 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 65000 Fmg. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 65000 Fmg.
5 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 10 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 4 volana. 5 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 80 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isanny vono olona tanatinny taona 1999-2001 dia 2. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 2. 2 no isanireo mpamono olona tratra tanatinny taona 1999-2001.